Izindaba - Ungasikhetha kanjani isondlo sangaphambili noma emuva sesibonisi sakho esiholwa.
Ungasikhetha kanjani isondlo sangaphambili noma emuva sesibonisi sakho esiholwa.
Izindlela zokulondolozwa kwesibonisi esiholelekile zihlukaniswe kakhulu ekulungisweni kwangaphambi nangemuva kokugcinwa.
Ukulungiswa emuva okusetshenziselwe izikrini ze-LED zokwakha izindonga zangaphandle, kufanele yakhelwe ngohlangothi olungemuva lwephaseji ukuze umuntu akwazi ukwenza ukulungiswa nokulungisa kusuka ngemuva komzimba wesikrini.
Qinisekisa ukuthi ubufakazi bamanzi banele ngokwanele endaweni engaphandle, isibonisi sangemuva sokugcina okuholelekile futhi sidinga iphrofayli ye-aluminium ezungeze iphakethe ukwenza isiqiniseko sokuthi awekho amanzi acwila esibonisweni esiholile, lelo banga okufanele lifike ku-IP65.
Izidingo zobuchwepheshe zizonke ziphakeme, ukufakwa nokususwa kunzima, futhi kudla isikhathi.
Futhi, ekubonisweni kwangaphandle okuholwa, i-YWTLED ithuthukise izindlela ezimbili zokulondolozwa kwangaphandle okuholelekile ngaphambili.
Isixazululo esisodwa sokulungiswa kwangaphambili ukuguquguquka kwesikulufa kwe-modular ku-pixel p3.91, p4.81, p5.33, p6.67, p8, p10, p16, okuyizinga lobufakazi bangaphandle eselivele lifana ne-IP65.
Ingaphambili lesibili langaphambili liyisixazululo esivulekile esingaphandle esivulekile sekhabhinethi.
Ikhabethe lomnyango ovulekile langaphambili elinentambo yokubacindezela kuhlanganiswe zonke izingxenye zokubonisa eziholwa.
Ngokulungiswa ngaphambili, isikrini esiholwa singakhelwa sibe mncane kakhulu futhi sikhanyise, sihlanganiswe nemvelo esiseduze, sifinyelele ukubukeka okuhambisanayo.
Kwenye indawo yasendlini ikakhulukazi enezikhala ezihlanganisiwe, noma ukufakwa okwenziwe ngodonga, kusobala ukuthi akuyona inketho enhle yokugcinwa kwangemuva.
Kanye nobuchwepheshe be-Narrow Pixel Pitch LED Display obuthuthukisiwe, ukukhonjiswa kwangaphakathi kwe-LED isibonisi silawula kancane kancane emakethe.
Ilungiselelwe ngozibuthe ukulungisa imodyuli kukhabethe noma esakhiweni sensimbi. Vula lonke ikhabethe noma amamojula ohlangothini olungaphambili, Lapho uqaqa, i-Sucker ngqo ithinta indawo yemodyuli yesondlo sangaphambili,
Uma kuqhathaniswa nokugcinwa emuva, inzuzo yesikrini se-LED yesondlo sangaphambili ikakhulukazi ukonga isikhala nokusekelwa kwesakhiwo, ukukhulisa ukusetshenziswa kwesikhala nokunciphisa ubunzima bomsebenzi ngemuva kokuthengisa.
Indlela yesondlo yangaphambili ayidingi i-aisle, isekela ukulungiswa kwangaphambilini okuzimele, futhi yonga isikhala esikrinini emuva.
Akunasidingo sokuqaqa ikhebuli, isekela umsebenzi wokulungisa ngokushesha, uqhathanisa nesondlo sangemuva, esidinga ukususa izikulufu eziningi kuqala ukuqaqa imodyuli yokulungiswa ngaphambili kulula futhi kulula. Kodwa-ke, ngenxa yesikhala esilinganiselwe segumbi, isakhiwo sinezidingo eziphakeme ekusakazekeni kokushisa kwekhabinethi, ngaphandle kwalokho isikrini kulula ukuthambekela ekuhlulekeni.
Ngakolunye uhlangothi, ukunakekelwa emuva kunenzuzo yayo.
Intengo ephansi, ukushisa okuhle kokushisa, okulungele kakhulu uphahla, ikholomu nezinye izenzakalo, futhi kunokuhlolwa okuphezulu nokusebenza kahle.
Ngenxa yohlelo lokusebenza oluhlukile, ungakhetha lezi zindlela ezimbili zokulungisa ngokuya ngezidingo zakho.
Isikhathi Iposi: Nov-07-2020